Chakavanzika Chitsvene—Sungano Dzinozivisa Mbeu Yakapikirwa (Genesi 3:15) | Swedera Pedyo
1, 2. “Chakavanzika chitsvene” chinofanira kutifadza ndechipi, uye nei?
ZVAKAVANZIKA! Nokuti zvinoshamisa, nokunakidza, vanhu kazhinji zvinovanetsa kuzvichengeta zvakavanzika. Zvisinei, Bhaibheri rinoti: “Ndiko kukudzwa kwaMwari kuti avanze chinhu.” (Zvirevo 25:2) Hungu, saChangamire Mutongi, uye Musiki, Jehovha nenzira yakakodzera anovanzira vanhu zvimwe zvinhu kusvikira yava nguva yake yakafanira yokuzvizivisa.
2 Zvisinei, pane chimwe chakavanzika chinonakidza uye chinoshamisa icho Jehovha akazivisa muShoko rake. Chinonzi “chakavanzika chitsvene chokuda” kwaMwari. (VaEfeso 1:9) Kudzidza nezvacho hakungogutsi kuda kuziva kwako chete. Zivo yechakavanzika ichi inogona kutungamirira kuruponeso uye inogona kukuita kuti unzwisise uchenjeri husingagumi hwaJehovha.
Chakaziviswa Zvishoma Nezvishoma
3, 4. Uprofita hwakanyorwa pana Genesi 3:15 hwakapa sei tariro, uye hwaibatanidza chakavanzika chei, kana kuti “chakavanzika chitsvene”?
3 Adhamu naEvha pavakatadza, zvingava zvakaita sokuti chinangwa chaJehovha chokuva neparadhiso yepasi inogarwa nevanhu vakakwana chakanga chavhiringidzwa. Asi Mwari nokukurumidza akagadzirisa chinetso chacho Akati: “Ndichaisa ruvengo pakati pako [nyoka] nomukadzi uye napakati pembeu yako nembeu yake. Achakukuvadza mumusoro newe uchamukuvadza pachitsitsinho.”—Genesi 3:15, NW.
4 Mashoko aya aitemesa musoro, chirahwe chaicho. Mukadzi uyu aiva ani? Nyoka yaiva ani? Ndiani aiva “mbeu” yaizopwanya nyoka mumusoro? Adhamu naEvha vaingoitawo zvokufungidzira. Kunyange zvakadaro, mashoko aMwari akapa tariro kuvana vose vakatendeka vomukadzi nomurume ivavo vasina kutendeka. Kururama kwaizokunda. Chinangwa chaJehovha chaizozadzika. Asi sei? Aaa, ichocho chakanga chiri chakavanzika! Bhaibheri rinochidana kuti “uchenjeri hwaMwari muchakavanzika chitsvene, uchenjeri hwakavanzika.”—1 VaKorinde 2:7.
5. Ipa muenzaniso wokuti nei Jehovha akazivisa chakavanzika chake zvishoma nezvishoma.
5 Zvaariye “Unozivisa zvakavanzika,” Jehovha pakupedzisira aizowadzanyura mashoko akazara pamusoro pokushanda kwechakavanzika ichi. (Dhanieri 2:28) Asi aizoita kudaro zvishoma nezvishoma, chikamu nechikamu. Kungopa somuenzaniso, tingafunga nezvemapinduriro anoita baba vane rudo pavanobvunzwa nekamwanakomana kavo kuti, “Baba, ini ndakabva kupi?” Baba vakachenjera vanongopa mashoko akangowanda zvokuti kakomana kacho kanogona kunzwisisa. Mukomana wacho zvaanokura, baba vacho vanomuudza zvakawanda. Saizvozvowo, Jehovha anosarudza kuti ndirini apo vanhu vake vanenge vagadzirira kuzarurirwa kuda kwake nechinangwa chake.—Zvirevo 4:18; Dhanieri 12:4.
6. (a) Sungano kana kuti chibvumirano chinobatsirei? (b) Nei zvichikosha kuti Jehovha aizotanga sungano nevanhu?
6 Jehovha akazvizarura sei izvi? Akashandisa sungano dzakawanda, kana kuti zvibvumirano, kuti azivise zvakawanda. Pamwe wakambopinda mune chimwe chibvumirano pane imwe nguva—pamwe chokutenga musha kana kuti chokukwereta kana kuti kukweretesa mari. Chibvumirano chakadaro chaipa vimbiso yepamutemo yokuti zvabvumiranwa zvaizozadziswa. Asi nei Jehovha aizoda kuita sungano, kana kuti zvibvumirano nevanhu? Chokwadi shoko rake ivimbiso yakakwana yezvipikirwa zvake. Ichocho ichokwadi, asi pazvinoitika zvakawanda, nomutsa Mwari akasimbisa shoko rake nezvibvumirano zvepamutemo. Zvibvumirano zvakasungwa zvakasimba izvi zvinotipa isu vanhu vasina kukwana chivimbo chakasimba muzvipikirwa zvaJehovha.—VaHebheru 6:16-18.
7, 8. (a) Isungano ipi iyo Jehovha akaita naAbrahamu, ichijekesa chii pachakavanzika chitsvene? (b) Jehovha akaramba achitetepesa zvishoma nezvishoma sei mutsara wedzinza reMbeu yakapikirwa?
7 Zvinopfuura zviuru zviviri zvemakore pashure pokudzingwa kwomunhu muParadhiso, Jehovha akaudza mushumiri wake akatendeka Abrahamu kuti: “Ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga, . . . ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako, zvawakateerera inzwi rangu.” (Genesi 22:17, 18) Ichi chakanga chisiri chipikirwa chete; Jehovha akachironga chiri muchimiro chesungano yepamutemo ndokuitsigira nemhiko yake isingaputsiki. (Genesi 17:1, 2; VaHebheru 6:13-15) Zvinoshamisa chaizvo kuti Changamire Ishe akatoita chibvumirano chokukomborera vanhu!
“Ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga”
8 Sungano yaAbrahamu yakaratidza kuti Mbeu yakapikirwa yaizouya somunhu nemhaka yokuti aizova wedzinza raAbrahamu. Asi aizova ani? Nokufamba kwenguva, Jehovha akazivisa kuti pavanakomana vaAbrahamu, Isaka ndiye aizova tateguru weMbeu yacho. Pavanakomana vaIsaka vaviri, Jakobho ndiye akasarudzwa. (Genesi 21:12; 28:13, 14) Jakobho akazotaura mashoko aya ouprofita kune mumwe wevanakomana vake 12 achiti: “Tsvimbo youshe haingabvi kuna Judha, kana mudonzvo womubati pakati petsoka dzake, kusvikira Shiro [“Muridzi Wayo”] auya; ndudzi dzose dzavanhu dzichamuteerera iye.” (Genesi 49:10) Zvino zvakanga zvava kuzivikanwa kuti Mbeu yacho yaizova mambo, uyo aizobva kuna Judha!
9, 10. (a) Jehovha akaita sungano yei norudzi rwaIsraeri, uye sungano iyoyo yakadzivirirei? (b) Mutemo wakaratidza sei kudikanwa kworudzikinuro nevanhu?
9 Muna 1513 B.C.E, Jehovha akaronga zvimwe zvaizoita kuti zvimwezve zviziviswe pamusoro pechakavanzika chitsvene. Akaita sungano nevazukuru vaAbrahamu, rudzi rwaIsraeri. Kunyange zvazvo iye zvino isingachashandi, sungano yoMutemo waMosesi iyi yakanga iri chinhu chinokosha chechinangwa chaJehovha chokuunza Mbeu yakapikirwa. Sei? Funga nezvenzira nhatu. Chokutanga, Mutemo wakanga wakaita sorusvingo rwaidzivirira. (VaEfeso 2:14) Mirayiro yawo yakarurama yaishanda somuganhu pakati pevaJudha neVemamwe Marudzi. Nokudaro Mutemo wakabatsira kuchengetedza mutsara weMbeu yakapikirwa. Nemhaka yokudzivirira ikoko zvikuru, rudzi rwacho rwakanga ruchiripo apo nguva yakafanira yaMwari yakasvika yokuti Mesiya aberekwe murudzi rwaJudha.
10 Chechipiri, Mutemo wakaratidza zvakasimba kuda kwevanhu rudzikinuro. Mutemo wakakwana, wakaratidza kusakwanisa kwevanhu vanotadza kuutevera zvizere. Naizvozvo wakashanda “kuti kudarika kuoneke, kusvikira mbeu ichisvika iyo yakanga yaitirwa chipikirwa.” (VaGaratiya 3:19) Kuburikidza nezvibayiro zvemhuka, Mutemo wakapa kuyananiswa kwezvinhu kwenguva pfupi. Asi sezvo, sokunyora kwakaita Pauro, zvisinga“bviri kuti ropa renzombe nerembudzi ribvise zvivi,” zvibayiro izvi zvaingofananidzira chibayiro chorudzikinuro chaKristu. (VaHebheru 10:1-4) Saka, nokuda kwevaJudha vakatendeka, sungano iyoyo yakava “mudzidzisi . . . [i]chitungamirira kuna Kristu.”—VaGaratiya 3:24.
11. Itariroi ine mbiri iyo sungano yoMutemo yaipa vaIsraeri, asi nei rudzi rwacho rwose rwakarasikirwa nayo?
11 Chechitatu, sungano iyoyo yaipa rudzi rwaIsraeri tariro ine mbiri. Jehovha akavaudza kuti dai vaizoramba vakatendeka kusungano yacho, vaizova “ushe hwavapristi, norudzi rutsvene.” (Eksodho 19:5, 6) Pakupedzisira, kuvaIsraeri venyama ndiko kwakazobva vokutanga voumambo hwokudenga hwevapristi. Zvisinei, sorudzi rwose vaIsraeri vakapandukira sungano yoMutemo, vakaramba Mbeu Mesiya, ndokurasikirwa netariro iyoyo. Saka ndiani zvino aizozadzisa umambo hwevapristi? Uye rudzi irworwo rwakakomborerwa rwaizova noukama hworudzii neMbeu yakapikirwa? Zvinhu izvozvo zvechakavanzika chitsvene zvaizoziviswa munguva yaMwari yakafanira.
Sungano yoUmambo hwaDhavhidhi
12. Jehovha akaita sungano yei naDhavhidhi, uye yakajekesei pachakavanzika chitsvene chaMwari?
12 Muzana remakore rechi11 B.C.E., Jehovha akawedzera kujekesa nezvechakavanzika chitsvene apo akaita imwe sungano. Akapikira Mambo Dhavhidhi akanga akatendeka kuti: “Ndichamutsa mumwe worudzi rwako uchakutevera, . . . ndikasimbisa ushe hwake. . . . , neni ndichasimbisa chigaro chake choushe nokusingaperi.” (2 Samueri 7:12, 13; Pisarema 89:3) Zvino mutsara weMbeu yakapikirwa wakanga watetepeswa uchienda kuimba yaDhavhidhi. Asi munhuwo zvake aigona kuzotonga “nokusingaperi” here? (Pisarema 89:20, 29, 34-36) Uye mambo akadaro aigona kusunungura vanhu pachivi norufu here?
13, 14. (a) Maererano naPisarema 110, Jehovha anoita chipikirwai kuna Mambo wake akazodzwa? (b) Ndezvipi zvimwe zvakaziviswa pamusoro pokuuya kweMbeu zvakaitwa kuburikidza nevaprofita vaJehovha?
13 Achifuridzirwa, Dhavhidhi akanyora kuti: “Jehovha wakati kunaShe wangu: Gara kurudyi rwangu, kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako. Jehovha wakapika, haangazvidembi, achiti: Iwe uri mupristi nokusingaperi. Une rudzi naMerkizedheki.” (Pisarema 110:1, 4) Mashoko aDhavhidhi aishanda zvakananga kuMbeu yakapikirwa kana kuti Mesiya. (Mabasa 2:35, 36) Mambo uyu aizotonga, kwete ari muJerusarema, asi ari kudenga ku“rudyi” rwaJehovha. Izvozvo zvaizomupa chiremera, kwete panyika yevaIsraeri chete, asi panyika yose. (Pisarema 2:6-8) Chimwe chinhu chakaziviswa pano. Cherechedza kuti Jehovha akataura mhiko yokuti Mesiya aizova “mupristi . . . une rudzi naMerkizedheki.” Kufanana naMerkizedheki, uyo akashanda samambo pamwe nomupristi muzuva raAbrahamu, Mbeu yaizouya yaizogadzwa zvakananga naMwari kushanda saMambo uye Mupristi!—Genesi 14:17-20.
14 Nokufamba kwemakore, Jehovha akashandisa vaprofita vake kuzivisa zvimwe pamusoro pechakavanzika chake chitsvene. Somuenzaniso, Isaya akazivisa kuti Mbeu yaizofa rufu rwechibayiro. (Isaya 53:3-12) Mika akafanotaura nzvimbo yaizoberekerwa Mesiya. (Mika 5:2) Dhanieri akafanotaura nguva chaiyo yokuoneka kwaMesiya nokufa kwake.—Dhanieri 9:24-27.
Chakavanzika Chitsvene Chinoziviswa!
15, 16. (a) Mwanakomana waJehovha akasvika sei paku“zoberekwa nomukadzi”? (b) Jesu akagara nhaka yei kubva kuvabereki vake vevanhu, uye akasvika rini seMbeu yakapikirwa?
15 Kuti uprofita uhwu hwaizozadziswa sei kwakaramba kuri chinhu chakavanzika kutozosvikira Mbeu yacho yaonekwa. VaGaratiya 4:4 inoti: “Asi nguva yacho yakati yanyatsokwana, Mwari akatumira Mwanakomana wake, akazoberekwa nomukadzi uye akava pasi pomutemo.” Mugore ra2 B.C.E., imwe ngirozi yakataurira mhandara yechiJudha Mariya kuti: “Tarira! uchanamba mudumbu mako wobereka mwanakomana, uye unofanira kumutumidza zita rokuti Jesu. Iyeyu achava mukuru uye achanzi Mwanakomana woWokumusorosoro; uye Jehovha Mwari achamupa chigaro choumambo chaDhavhidhi baba vake . . . Mudzimu mutsvene uchaburukira pauri, uye simba roWokumusorosoro richakufukidza. Saka ichochowo chichaberekwa chichanzi chitsvene, Mwanakomana waMwari.”—Ruka 1:31, 32, 35.
16 Gare gare, Jehovha akatamisa upenyu hwoMwanakomana wake kubva kudenga kuenda mudumbu raMariya, zvokuti akazoberekwa nomukadzi. Mariya akanga ari mukadzi asina kukwana. Asi Jesu haana kugara nhaka yokusakwana kwaari, nokuti akanga ari “Mwanakomana waMwari.” Panguva imwe chete, vabereki vaJesu sevanhu vedzinza raDhavhidhi vakamupa kodzero dzokuberekwa nadzo uye dzepamutemo dzokuva mudyi wenhaka yaDhavhidhi. (Mabasa 13:22, 23) Pakubhabhatidzwa kwaJesu muna 29 C.E., Jehovha akamuzodza nomudzimu mutsvene ndokuti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa.” (Mateu 3:16, 17) Pakupedzisira, Mbeu yakanga yasvika! (VaGaratiya 3:16) Yakanga yava nguva yokuzivisa zvakawanda nezvechakavanzika chitsvene.—2 Timoti 1:10.
17. Zvinoreva Genesi 3:15 zvakajekeswa sei?
17 Muushumiri hwake, Jesu akaratidza kuti nyoka yepana Genesi 3:15 ndiSatani uye mbeu yenyoka sevateveri vaSatani. (Mateu 23:33; Johani 8:44) Gare gare zvakazoziviswa kuti vose ava vaizoparadzwa sei nokusingaperi. (Zvakazarurwa 20:1-3, 10, 15) Uye mukadzi akaziviswa kuva “Jerusarema riri kumusoro,” sangano raJehovha rokudenga rakaita somudzimai rezvisikwa zvomudzimu. *—VaGaratiya 4:26; Zvakazarurwa 12:1-6.
18. Ndechipi chiri chinangwa che“sungano itsva”?
18 Zvichida kuzivisa kunoorora kupfuura kumwe kwose kwakaitika pane humwe usiku, Jesu achizofa mangwana acho, apo akaudza vadzidzi vake vakatendeka nezve“sungano itsva.” (Ruka 22:20) Kufanana nesungano yoMutemo waMosesi yakaitangira, sungano itsva yaizobudisa “ushe hwavapristi.” (Eksodho 19:6; 1 Petro 2:9) Zvisinei, sungano iyi yaizobudisa, kwete rudzi rwenyama, asi rwomudzimu, “Israeri waMwari,” anoumbwa nevateveri vakatendeka vakazodzwa bedzi vaJesu. (VaGaratiya 6:16) Ivava vari musungano itsva ndivo vaizobatsirana naJesu kukomborera vanhu!
19. (a) Nei sungano itsva ichibudirira kubudisa “ushe hwavapristi”? (b) Nei vaKristu vakazodzwa vachinzi “chisikwa chitsva,” uye vangani vachashumira mumatenga naKristu?
19 Asi nei sungano itsva ichibudirira kubudisa “ushe hwavapristi” kuti hukomborere vanhu? Nemhaka yokuti panzvimbo pokuratidza vadzidzi vaJesu kuti vatadzi, inopa mukana wokukanganwirwa kwezvivi zvavo kuburikidza nechibayiro chake. (Jeremia 31:31-34) Vangowana kumira kwakachena chete pamberi paJehovha, anovagamuchira mumhuri yake yokudenga ovazodza nomudzimu mutsvene. (VaRoma 8:15-17; 2 VaKorinde 1:21) Nokudaro ‘vanoberekwa patsva kuti vave netariro mhenyu . . . yavakachengeterwa kudenga.’ (1 Petro 1:3, 4) Sezvo nzvimbo yakakwirira zvakadaro iri itsva chaiyo kuvanhu, vaKristu vakazodzwa vakaberekwa nomudzimu vanonzi “chisikwa chitsva.” (2 VaKorinde 5:17) Bhaibheri rinozivisa kuti 144 000 pakupedzisira vachatongawo vari kudenga vanhu vakadzikinurwa.—Zvakazarurwa 5:9, 10; 14:1-4.
20. (a) Chii chakaziviswa pamusoro pechakavanzika chitsvene muna 36 C.E.? (b) Ndivanaani vachawana zvikomborero zvakapikirwa kuna Abrahamu?
20 Pamwe chete naJesu, vakazodzwa ava vanova “mbeu yaAbrahamu.” * (VaGaratiya 3:29) Vakatanga kusarudzwa vakanga vari vaJudha venyama. Asi muna 36 C.E., rumwe rutivi rwechakavanzika chitsvene rwakaziviswa: Vemamwe Marudzi, kana kuti vakanga vasiri vaJudha, vaizovawo netariro yokudenga. (VaRoma 9:6-8; 11:25, 26; VaEfeso 3:5, 6) VaKristu vakazodzwa ndivo bedzi here vaizowana zvikomborero zvakapikirwa kuna Abrahamu? Aiwa, nokuti chibayiro chaJesu chinobatsira nyika yose. (1 Johani 2:2) Nokufamba kwenguva, Jehovha akazivisa kuti “boka guru revanhu” risina nhamba raizopona pamugumo wenyika yaSatani. (Zvakazarurwa 7:9, 14) Zvimwe zviuru zvaizomutswa zvine tariro yokurarama nokusingaperi muParadhiso!—Ruka 23:43; Johani 5:28, 29; Zvakazarurwa 20:11-15; 21:3, 4.
Uchenjeri hwaMwari uye Chakavanzika Chitsvene
21, 22. Munzirai umo chakavanzika chaJehovha chinoratidza uchenjeri hwake?
21 Chakavanzika chitsvene kuratidzwa kunoshamisa kwo“uchenjeri hwaMwari hwakasiyana-siyana zvikuru.” (VaEfeso 3:8-10) Jehovha akaratidza uchenjeri hukuru kwazvo mukuronga chakavanzika ichi, uye mukuchizivisa zvishoma nezvishoma kudai! Nouchenjeri akarangarira zvaisakwanisa kuitwa nevanhu, achivabvumira kuratidza mamiriro echokwadi omwoyo yavo.—Pisarema 103:14.
22 Jehovha akaratidzawo uchenjeri husina humwe hwakafanana nahwo mukusarudza kwake Jesu saMambo. Mwanakomana waJehovha akavimbika kupfuura zvimwe zvisikwa zvose zviripo. Paakararama ari munhu ane nyama neropa, Jesu akatambura nenhamo dzemarudzi akasiyana-siyana. Anonyatsonzwisisa zvinetso zvevanhu. (VaHebheru 5:7-9) Uye zvakadini nevanotonga pamwe naJesu? Kwemazana emakore varume nevakadzi—vakasarudzwa kubva mumarudzi ose, mitauro, nokukurira kwakasiyana-siyana—vakazodzwa. Hapana chero chinetso icho vanhu vari pakati pavo vasina kutarisana nacho vakachikunda. (VaEfeso 4:22-24) Kurarama pasi pokutonga kwemadzimambo nevapristi vane tsitsi ava kuchafadza zvikuru!
23. Iropafadzo yei iyo vaKristu vanayo pamusoro pechakavanzika chitsvene chaJehovha?
23 Muapostora Pauro akanyora kuti: “Chakavanzika chitsvene chakanga chakavanzika kubvira mugadziriro dzezvinhu dzekare nomuzvizvarwa zvakapfuura . . . chakaoneswa vatsvene vake.” (VaKorose 1:26) Hungu, vatsvene vakazodzwa vaJehovha vakasvika pakunzwisisa zvakawanda pamusoro pechakavanzika chitsvene, uye vakagovana zivo iyi nemamiriyoni. Iropafadzo yakakura kwazvo iyo tose tinayo! Jehovha “akatizivisa chakavanzika chitsvene chokuda kwake.” (VaEfeso 1:9) Ngatiudzewo vamwe chakavanzika chinoshamisa ichi, tichivabatsirawo kutarisa muuchenjeri husina mugumo hwaJehovha Mwari!
^ ndima 17 “Chakavanzika chitsvene chokuzvipira kuna Mwari” chakaratidzwawo muna Jesu. (1 Timoti 3:16) Chakanga chagara kwenguva refu chakavanzika, chisinganzwisisiki, kuti pane munhu here angaramba akazvipira zvakakwana kuna Jehovha. Jesu akazivisa mhinduro yacho. Akaramba akavimbika pamiedzo yose yaakaunzirwa naSatani.—Mateu 4:1-11; 27:26-50.
^ ndima 20 Jesu akaitawo “sungano youmambo” neboka rimwe chete iroro. (Ruka 22:29, 30) Naizvozvo, Jesu akaita chibvumirano ne“boka duku” kuti vachatonga naye kudenga sorutivi rwechipiri rwembeu yaAbrahamu.—Ruka 12:32.
Johani 16:7-12 Jesu akatevedzera sei nzira yaBaba vake yokuzivisa chokwadi zvishoma nezvishoma?
1 VaKorinde 2:6-16 Nei vazhinji vasingakwanisi kunzwisisa zvakavanzika zvitsvene zvaJehovha, uye tinganzwisisa sei zvakavanzika izvi?
VaEfeso 3:10 Iropafadzo yei iyo vaKristu vanayo nhasi maererano nechakavanzika chitsvene chaMwari?
VaHebheru 11:8-10 Chakavanzika chitsvene chakasimbisa sei kutenda kwevarume vekare, kunyange zvazvo mashoko acho akazara akanga asinganzwisiswi?
Tingadzidzei pazvipikirwa zvaMwari, mhiko, uye sungano?